“Laqwiga waan iska ilaalinaynaa, ee Illaahay Roob ha innoo keeno.” Daahir Rayaale | Berberanews.com
Home WARARKA “Laqwiga waan iska ilaalinaynaa, ee Illaahay Roob ha innoo keeno.” Daahir Rayaale
“Laqwiga waan iska ilaalinaynaa, ee Illaahay Roob ha innoo keeno.” Daahir Rayaale
Hargeysa(Berberanews):- Madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa Isniintii Maanta si diirran loogu soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa, isla markaana waxa uu Allaah ka baryey inuu Roobka innoo shubo, isaga oo intaas ku daray inuu rejaynayo in doorasho fiicani ka qabsoonto Somaliland 2017-ka.
Waxaa Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale ku soo dhaweeyey Madaarka Hargeysa Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ahna Musharraxa jagada Madaxweynaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan-Cirro, Musharraxa jagada Madaxweyne Ku-xigeenka Waddani Maxamed Cali, Masuuliyiin iyo Xubno kale oo isla Waddani ka tirsan.
“Laqwiga waan iska ilaalinaynaa, ee Illaahay Roob ha innoo keeno, Illaahay Abaartan Ummadda haka soo furto, Illaahay Roob anfaca Xawayaankiisa iyo Bina-aadamkiisa oo caam yeela Ummadda ha innoo keeno. Illaahayoow waan ku baryeynaa naga aqbal.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweynihii hore ee Somaliland.
Md. Daahir Rayaale Kaahin oo wixii ka dambeeyey markii lagaga guulaystay doorashada 2010-kii si rasmi ah u deggan waddanka Faransiiska, imashadiisa dalkuna dhawr jeer oo qudha ku koobnayd, ayaa markii shalay Madaxda Xisbiga Waddani soo dhawaysay ka dib oo ay Saxaafaddu xaaladda dalka wax ka weydiisay, ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimahaas, waxaanu si kooban ugu jawaabay; “Somaliland khayr baan u rejaynayaa, doorasho fiicani inay u dhacdo, kii Illaahay gartaana ku soo baxo.”
Previous articleWaa muhim in Xakamaynta sicir-bararka laga wada shaqeeyo iyada oo loo midaysan yahay sida u dhakhsaha badan – Cabdirashiid Ducaale
Next articleKulmiye oo madal ballaadhan ku qaabilay Garabkii Jamaal Cali Xusen ee New UCID